အိချော – Grab Love Story
by phyu June 21, 2021
ကျမအမည်က အိချောပါ။ အသက်က ၂၀ရှိပြီ။အိမ်ထောင်နဲ့ဆိုပေမဲ့ ထန်နေတဲ့စော်လေးပါ။ ကိုမင်းမော် ခရီးထွက်သွားတာနဲ့ ကျမပိုလွတ်လပ်လာတယ်။ ဦးမောင်ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်တယ်။ ဦးမောင်ရောက်မလာခင် အဝတ်ဗလာချွတ်ပြီး ရေးချိုးခန်းထဲရေချိုးလိုက်တယ်။ ဆပ်ပြာမြုပ်တွေနဲ့ကျမနို့တွေကိုပွတ်သပ်နေတုန်း ဦးမောင်ရောက်လာတယ်။ ဦးမောင်နဲ့ကျမ ကိုမင်းမော်ကွယ်ရာဖောက်ပြန်နေကြတာလေ။အခုလို ချိန်းပြီးဖောက်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့ အို။
ဆပ်ပြာမြုပ်နဲ့အမွှေးဆီတွေက ကျမစောက်ဖုတ်ကို သန့်စင်ပေးနေတယ်။ ဦးမောင် ဧည့်ခန်းထဲထိုင်စောင့်နေလောက်ပြီ။ တဘတ်နဲ့ရေစိုသုတ်ရင်း ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာလိုက်တယ်။ ဦးမောင်က ကျမခန္ဓာကိုယ်ကို တဝကြီးကြည့်နေတော့ ရှက်လို့ဖင်တွန့်သွားတယ်။ ဦးမောင် အဝတ်တွေချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျမ လက်ထဲက တဘတ်ကိုချလိုက်ပြီး ဦးမောင်ဆီလျှောက်လာတယ်။ ဦးမောင်ရဲ့လီးတန်မဲကြီး မတ်ထောင်လာတယ်။ ကျမလက်နဲ့ ဦးမောင်လီးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ဂွင်းထုပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဒူးထောက်လိုက်ပြီး လီးတန်မဲကြီးကို စုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ”အိုး ကောင်းလိုက်တာရှင်” နာရီဝက်လောက် လျှာနဲ့ယက်လိုက် တပြွတ်ပြွတ်ဆွဲစုပ်လိုက်လုပ်ပေးဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ဦးမောင်ကို ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ခိုင်းပြီး ကျမစောက်ဖုတ်ဝကို လီးတေ့ပြီးဆောင့်လိုက်တယ်။
”အ အား ဦးမောင်ရယ် သိပ်ချစ်တာပဲရှင်”
ကျမ တက်ညှောင့်လိုက်တိုင်း လီးကြီးနဲ့စောက်ဖုတ်ခတ်သံ တဘွတ်ဘွတ်ညံနေတော့သည်။ ဦးမောင်က ကျမခါးကိုလက်နဲ့ထိန်းကိုင်ရင်း တဖုန်းဖုန်းဆောင့်လိုးရာ လိုးသံတွေကျယ်ကျယ်လာပြီး ကျမစောက်ဖုတ်မှာ ပြဲအာလာတော့သည်။
တဖြည်းဖြည်း နှင့် လိုးချက်တွေက သိပ်ကို ပြင်းထန်လာသည်။ ကျမ စောက်ဖုတ်ကလည်း အပျိုရည်သာ ပျက်ဖူးတာ စောက်ဖုတ်ကလေးက မို့မို့မောက်မောက်ဖောင်းဖောင်းလေး အမွှေးကလည်း သိပ်မထူ ပါးပါးလျားလျားလေးဆိုတော့ သိပ်ကိုလိုးကောင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်အမျိုးအစားပေါ့။ဦးမောင်တစ်ယောက် စောက်ဖုတ်နုနုလေးကို လိုးနေရတာ ကျပ်ကျပ်ထုပ်ထုပ်နဲ့မို့ လီးရည်ထွက်ချင်လာသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလိုစောက်ဖုတ်အဖိုးတန်လေးကို လိုးရတာ တစ်ချီတည်းနှင့်တော့ မပြီးချင်သေး။ ကျမ စောက်ခေါင်းထဲကို ၀င်နေသည့် လီးကို အသာလျှော့ပြီး စိတ်ကို ပြန်ထိန်းထားရသည်။ သုက်ထွက်သွားလို့ မဖြစ်သေး။ ကြီးမားသည့် လီးတစ်ချောင်းလုံး အ၀င်အထွက် နှင့်မို့ တစ်ခါမှ မခံစားဖူးသည်အလိုးခံရသည့် ဝေဒနာအရသာကို ခံစားနေမိတော့သည်။
စောက်ဖုတ်ထဲဝင်လာသည့် လီးတစ်ချောင်းလုံးက စောက်ဖုတ်နံရံတစ်လျှောက်ပွတ်တိုက် လျှောဝင်သွားတာကို ကျောရိုးတစ်လျှောက်လုံး စိမ့်သွားသည့် ကောင်းလွန်းသည့်ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံး စကားလုံးမဲ့လောက်အောင် ထူးကဲကေင်းမွန်သည့် ကျင်စိမ့်သည်ကို မရဖူးခဲ့။ ကျမက အရင်ကတည်းက စောက်ဖုတ်ယားတတ်တဲ့ မိန်းမ ဆိုတော့ အလိုးခံရတာ ဖီးသိပ်မလာ။ အားရပါးရ လိုးတာမျိုးကို ခံစားချင်တာ။
ဦးမောင်က ပေါင်နှစ်ဘက်ကို သိမ်းကျုံးမပြီး စောက်ဖုတ်ထဲ ဖြဲလိုးနေရာကနေ နို့သီးတွေကို လက်နှစ်ဘက်နှင့် ဆုပ်ပြီး အတင်းနယ်တော့သည်။ ပြီးမှ ကျမရဲ့ နီရဲ နေသည့် နှုတ်ခမ်းပါးလေးကိုအားရပါးရ စုပ်နမ်းရင်း..
“အား..အိချောရယ် သိပ်ကောင်းတာပဲ ဦးမောင်တော့လေ..အိချောကို အရမ်းဆော်ချင်နေပြီ အချစ်လေးရာ”
“အား..အို အိုး ဦးမောင်ရယ် နာတယ် နည်းနည်းလျှော့ပါဦး”
ပြောသာ ပြောနေရတာ အရင်ကတည်းက ကုန်းချင်နေတာဆိုတော့ မူမူလေးပြောမိသည်။ အဲဒီလို ပြောတာလေးကိုက ဦးမောင်ကို လီးတောင်စေခဲ့တာ။ အရင်ကဆို ဦးမောင် နားကပ်ပြီး တင်ပါးလေးနဲ့ ပွတ်သလို ၊ နို့လေးနဲ့ မထိခလုတ်ထိခလုတ်လုပ်သလို လုပ်တာမျိုး ကျမဘက်က စလုပ်ခဲ့တာ။ တစ်ယောက်တည်း လက်နဲ့ ပလက်လှန် ပွတ်ခဲ့ရတဲ့ နေ့တွေက မနည်းဘူးလေ။ဦးမောင်နဲ့ေ တွ့တော့ ဦးမောင်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ပေးချင်နေတာ။ဦးမောင်နဲ့များ လိုးလိုက်ရရင် ဆိုတာမျိုး ကျမ တစ်ယောက်တည်း စိတ်ကူးယဉ်နေကြ။ တင်းလွန်းသည့် ဂျောတွေ နဲ့မို့ ဦးမောင်ကလည်း ဖြုတ်ဖို့ကြံ ၊ ကျမကလည်း ဖင်ခံဖို့တွေး ဆိုတာမျိုး ဖင်ကောင်းနဲ့ လီးကောင်းက သွားတွေ့ကြတာ။
“အိချော..ချစ်တယ်အား…” ကျမ စောက်ဖုတ်ထဲကို ဦးမောင်က ဆီးစပ်ချင်း ထိသည် အထိ လိးကိုသွင်းလိုးရင်း ပြောတော့…
“တကယ်လား ဦး ..အိချောကို မလှည့်စားနဲ့နော်….” လိုးခံသံလေးနှင့်မို့ ဖီးလာစရာကောင်းသည့် အသံလေးက လီးတောင်ချင်စရာ..
ကျမကိုယ်လေး တစ်ပတ်လိမ့်သွားတယ်။ ဖောင်းကားပြီး တင်းရင်းနေတဲ့ အိုး ။ ကျမရဲ့ ဖင် တင်သားလေး နှစ်လုံးက ၀င်းကခနဲ့ လင်းခနဲ့။အလျင်အမြန်ပဲ ဖင်နှစ်လုံးကို ဆွဲဖြဲကာ မှောက်လျှက်ဖြစ်နေတဲ့ ကျမ ဖင်ပေါ်တက်ခွကာ ၊ စအိုနေရာကို လီးဒစ်ကို ထည့်လိုက်တယ်။ လီးက မ၀င်။
“အိချောဖင်ကုန်းမှ ဦးမောင်လိုးလို့ရမှာ ဖင်ကုန်းပြီး လိုးခံနော်”
ခြေထောက်က ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အခုမှ ဖင်က ပြဲပြီး ပိုကားသွားတယ်။ ဖင်ကုန်းမှ ပိုလိုးချင်စရာကောင်းနေတော့တယ်။ဦးမောင်လီးက ကျမ စအိုထဲကို တန်းတန်းမတ်မတ်ဝင်သွားတယ်။
”အား..ဖင်နာလိုက်ရှင်။အီး အိုး သေပါပြီ”
ဖင်အိုးကြီးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်ပြီး လက်ကုန်ဗြင်းလေရာ ကျမ သုတ်ရည်များပင် ထွက်
ခရမ်းသီးထက်စာရင် ဦးလီးက အရသာပိုရှိတယ်လို့ ပြောမှာလား……
သွားပါ…သူ့ဟာကြီးကဖြင့် ခရမ်းသီးထက်တောင် ကြီးသေး…
ကျမ ဖင်အိုး စအိုခေါင်းထဲက ဦးမောင်လီးကြီးလျှောခနဲ ပြန်ထွက်လာတယ်။
ပြီးတော့ ဦးမောင်က အသင့်ပါလာတဲ့အိတ်ထဲကနေ ဆေးရည်ဘူးနဲ့ဆေးထိုးအပ်ထုတ်လိုက်
ဆေးထိုးပြီး သိပ်မကြာခင် ဦးမောင်လီးမဲမဲကောက်ကောက်ကြီးက ပိုထွားကျိုင်းလာတယ်။
ဦးမောင်က ကျမပေါင်ကြား၌ ရပ်လိုက်သည်..။ မိုးပေါ်ထိုးတက်တော့မယောက် မတ်ထောင်နေသော လီးကြီးက အဖျားငိုက်သွားပြီး…ဒစ်ပြဲကြီးက ကျမပါးစပ်ဝ၌ တေ့ကပ်လာသည်..။
ကျမ လီးကိုစုံကိုင်ဖြဲချပြီးပြီဆိုမှ လျှာနီနီလေး ထိပ်ဖျားဖြင့် ကလိလိုက်ကာ..ဒစ်တဝိုက်ကို လျှောက်ယက်ပစ်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့မှ လီးကြီးကို ပါးစပ်လေး အစွမ်းကုန် ဟပြီး ငုံခဲကာ စုပ်သွင်းလိုက်သည်..။
ဦးမောင်ရဲ့တင်ပါးကြီးများ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်ရင်းပြောသည်..။
ပါးစပ်ထဲရှိ ဒစ်ကြီးကို ကျမက လျှာလေးဖြင့်မနားတမ်း ယက်ပေး ကလိပေးရင်း ရှေ့နောက် လှုပ်ရှားပေကာ တံတွေးမျာ စိုစွတ်ကုန်သည်အထိ စုပ်ပေးလိုက်သည်..။ဦးမောင်က အရှိန်တက်လာပြီး ကျမနောက်စေ့လေးကို ချုပ်ကိုင်ကာ ပါးစပ်ထဲသို့ ဆောင့်လိုးချလိုက်သည်..။ ကျမမှာ အသက်ရှူများ မှားတော့မလိုဖြစ်သွားရသည်..။
ပြီးမှ ပါးစပ်မှ ပြွတ်ခနဲ ဆွဲချွတ်ပြီး သုတ်ရေများကို နို့လေးနှစ်လုံးပေါ်သို့ ပွပ်ခနဲ ဖောက်ခနဲ ပန်းချပစ်လိုက်သည်..။ ပူနွေးသော သုတ်ရေများက နို့တွေပေါ်တွင် ပူခနဲ ပူခနဲ ကျရောက်လာလေရာ ကျမမြတ်နိုးနှစ်သက်စွာဖြင့် ပွတ်သပ်လိမ်းကျံနေမိပြန်သည်..။
တသင်းသင်းလှိုင်နေသော သုတ်ရည်ရနံ့များက ကျမတို့နှစ်ဦးကို လွှမ်းခြုံထားလေသည်..။
အိချော…ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဦးမောင်ပုခုံးပေါ်တင်…..` ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်ရာ ကျမ၏ လုံးတစ်တင်းမာနေသော စောက်ဖုတ်လေးနှင့် မဟူရာရောင်လီးကြီးတို့မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိနေကြပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်နေကြပေသည်..။ ကျမ ခုံပေါ်တွင် ပက်လက်ကလေးဖြစ်သွားရသည်..။ ခြေနှစ်ချောင်းက ခုံအောက်မှ မတ်တတ်ရပ်နေသော ဦးမောင် ပုခုံးပေါ်ရောက်နေရာ လီးနှင့် စောက်ဖုတ်တို့မှာ တစ်လက်မပင် မကွာတော့ပေ…။ သူ့လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးအတိုင်း အထက်အောက် ပွတ်သပ်ဆွဲချပေးပြီး အရေများ စိုရွှဲသွားမှ… လိုးမယ်နော်…အင်း….အင်း……. နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ပူးကပ်ပြီး ပါးစပ်အတွင်းသို့စုသွင်းကာ အင်း အင်း ဟုပြောရင်း ဝင်လာမည့်လီးကြီးကို အသင့်စောင့်ကြိုရန် မျက်စေ့မှိတ်ထားမိသည်..။ ဒစ်ပြုတ်ကြီးက စောက်ဖုတ်လေးအောက်ဖက်နားမှ ကော်ဝင်သွားလေပြီ…။ ပြွတ်……အေ့……အမေ့….. ကျမ အသံလေးနဲနဲ ကျယ်သွားသည်ထင်၏..။ လန့်ပြီး အော်လိုက်မိသည်..။ ဗြစ်…ထစ်..ထစ်…ဗြစ်…..အားရိုးရိုး…..ကြပ်လိုက်တာရှင်….ဗြစ်….ဗြစ်…ဖလွတ်…..အား…….ကွဲပြီ….ဦး…. '' ဘွတ် ဘွတ် ဘွပ် '' ''အင့် အ အား အာ အား '' ကျမ ကုန်းထရင်း အော်သည်..။ ဗြစ်….ဒုတ်……အမလေး…..သေပါပြီ….”
ကုန်းထလိုက်မှ လီးကြီးက ပိုဝင်သွားပြီး စောက်ဖုတ်အောက်နှုတ်ခမ်းလေးမှာလဲ စပါးလုံးနှစ်ထောက်စာခန့် ကွဲသွားပြီး..စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်သွားလေသည်..။ ထိုစဉ်တိုင် လီးကြီးက တဝက်မကျိုးသေး…။
တော်ပြီ….တော်ပြီ…ပြန်ချွတ်တော့…လီးကို အခုပြန်ချွတ်ပေး…..ဟင့် ဟင့်……..
ကျမ နာကျင်လွန်း၍ ကြိတ်ပြီးအော်သည်..။ မျက်ရေများလည်း ကျဆင်းလာသည်..။ မျက်နှာလေးက ငိုမဲ့မဲ့ သနားစဖွယ်လေးပင်…။
အဟီး…..ဟီး..နာတယ် ဦးရဲ့…နာတယ် မခံနိုင်တော့ဘူး…..အဟူး…ဟူး…..အီး…အ….ဟင့်….ဟင့်..
ခလေးလေးပမာ ကျမ ငိုပါလေပြီ…။ ဦးမောင်ကကလည်း အရှိန်တက်နေပြီဖြစ်ရာ စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့ ကျန်လီးကြီး တဝက်ကို ဖိသွင်းချလိုက်လေတော့သည်..။
ဟင့်….အွန့်…. ကျမ ပါးစပ်လေးဖောင်းသွားပြီး အသက်အောင့်ထားသည်..။ ဗိုက်ထဲသို့တိုင် ဝင်သွားပြီလားဟု ထင်မှားစရာ ရှည်လျားလွန်းလှသည့်လီး……။ လီးကြီးက အဆုံးဝင်သွားမှ ငြိမ်သက်သွားသည်..။ အသက်မှန်အောင် ရှူနေရရှာသည်။ဦးမောင်က စောက်ခေါင်းထဲတွင် တစိမ့်စိမ့် တရွရွလေး လှုပ်ရှားနေသော စောက်ဖုတ်အတွင်းသားများ၏ ကလူကျီစယ် ပွတ်သပ်မှုကို ငြိမ်ပြီး ခံစားရင်း ကျမရဲ့ဟင်းရေသောက်ပန်ကန်လုံးနီးပါးမျှ နို့အုံကျစ်ကျစ်တွေကို လုံးခြေ ပွတ်သပ်ကာ နို့သီးခေါင်းလေးများကို ခြေပေးနေလိုက်သည်..။ အင်း….ဟင်း ဟင်း….ကျွတ် ကျွတ်….အား..ဟား… ကျမ ဖင်လေးကို လူးလွန့်ပြီး လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများဖြင့် ဖြစ်ညှစ်ကာ ခါးလေးကော့ကော့ပေးလိုက်လေသည်..။ ဖိကပ်ထားလျက်သား ဆတ်..ပြီးဆောင့်လိုက်သော အရသာကား ခံကောင်းလွန်းလှပါကလား…။ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးများကို ကိုင်ပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ကော့ဆောင့်ပစ်လိုက်ကာ အီဆိမ့်ချိုအေးသော ကာမအရသာကို အပြည့်အဝကြီး ခံစားလိုက်ရလေတော့သည်..။ ထွက်…..ထွက်ကုန်ပြီ…..ဟင့် ဟင့်….. ကျမ နောက်တစ်ချီ ပြီးပြန်လေပြီ…။ဦးမောင်က သူ့လီးကြီးကို ငုတ်ကြီးဆွဲထုတ်သလို ဖြေးဖြေးချင်း ရှည်လျားစွာ တအိအိ ဆွဲထုတ်ပြီးမှ ကျမအား လေးဘက်ကုန်းစေပြန်သည်..။ ဟင်…..အ..ဦးမောင်….ဖင်ကို ထပ်လိုးမလို့လား…..မဟုတ်ပါဘူး ….စောက်ဖုတ်လေးကိုပဲ လိုးမှာပါ….ဟာ….ဝင်ပါ့မလား…..နောက်ပြန်ကြီး…..ခါးခွက်ထား….အေး.တင်ပါးလေး ဖြဲကားထား….. ပြူးထွက်လာသော စောက်ဖုတ်လေးက အဝေးမှ လမ်းမီးရောင်ဖြင့် တဖိတ်ဖိတ် လှပလို့နေသည်..။ လိုးရက်စရာ မရှိအောင် လှပသော သမီးလေး ကျမအား ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့် လိုးပြန်ပါတော့သည်…။ ပြွတ်…ပြွတ်….ဗြစ်…..ဗြစ်…………အင့်..အင့်….အသံတွေကလဲ ကျယ်လိုက်တာ ဦးမောင်ရာ…..ရှက်စရာကြီး……အရေတွေ ထွက်ကုန်လို့ပါ….အိချောရဲ့……..အိ…အီး ကောင်းလိုက်တာနော်…..ဟင်း…ဟင်း….ကျွတ်….ပြွတ် ပြွတ်…..ပြစ် …ပြစ်…..အင့် အင့်…..အ…..အ……… ဖင်လေးကို လမွှေးအုံကြီးက ဖိကပ်ပွတ်တိုက်ရင်း ဂွေးဥကြီးကပါ စောက်ဖုတ် အထက်ပိုင်းကို အောက်မှ လွှဲရိုက်နေသည်မို့ မခံစားဖူးသော အလိုးခံခြင်းအရသာကို ခံစားနေရသည်..။ `အ..အား…ဖြေးဖြေး…..ဆောင့်ပါ…ရှင်….ကျွတ်….ကျွတ်…..
”အို..အိုး အူးးးးး”
”ကောင်မ မထနိုင်အောင် လိုးပေးမယ်”
ကျမ စိတ်မရှည်သလိုပြောရင်း နောက်သို့ ပြန်ပြီး တွန်းတွန်းပြီး ဆောင့်ဆောင့်နေလိုက်ရာ လီးကြီးမှာလဲ သံချောင်း သံတုတ်ကြီးပမာ ပို၍ ပို၍ တင်းပြောင် မာကျောသွားပြီး စောက်ခေါင်းထဲသို့ သုတ်ရေများ ပန်းထည့်လိုက်လေသည်..။ ကျမကလဲ စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရေလေးများ ဒလဟော လွှတ်ချလိုက်လေရာ လီးနှင့် စောက်ဖုတ်တို့ သာမက ဖင်များ ဆီးခုံများပါ ပေကျံကုန်လေသည်..။
ဦးမောင်က လီးကြီးကို မချွတ်ပဲ ကျမကျောပြင်လေးကို ကုန်းနမ်းရင်း တွဲလဲလေးကျနေသော နို့တွေကို အောက်မှ လျှိုပြီး နှိုက်ကာ သုံးလေးချက်မျှ ဖိကပ်ဆောင့်ချလိုက်ရာ တင်ပါးဖြူဖြူလေးများ ကျောက်ကျောတုံးလေးများပမာ တုံခနဲ တုံခနဲ ခါရမ်းသွားလေသည်..။
ကျမလဲ နုံးချိပျော့ခွေပြီး မှေးနေလေသည်..။ လီးကြီးကို မချွတ်ပဲ စိမ်ထားရင်း ဦးမောင်က တိုးတိုးပြော၏…။
ပုဇွန်ထုပ်ကွေးကလေး လိုးရအောင် ….
ဟဲဟဲ…အိချောက ရှက်နေတုန်းပဲ ကိုး…..
ကျမမျက်နှာလေး ဆွဲလှည့်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို တအားစုပ်ယူလိုက်ရင်း လီးကြီးကို ဖိဆောင့်ချလိုက်ရာ ဟင်းခနဲ မြည်ပြီး မျက်တောင်လေးများ မှေးကျသွားရရှာတော့တယ်။
ဖြူဝင်းသော အသားလေးများဖြင့် နို့လေးများက ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေသည်..။ စွင့်ကားသော ဖင်အိုးကြီးမှာလဲ လွတ်လပ်စွာ ပေါ်နေသည်..။ ဦးမောင်က အောက်မှ ပက်လက်အနေအထား..၊ ဦးမောင်ပုဆိုးက ခါးသို့ လိပ်တက်နေ၍ ကြီးမားနီရဲသော ဒစ်ပြဲပြဲကြီးက ကျမဖင်ကြီးဘေးမှ ကပ်လျက်သားကြီး ထောင်နေသည်..။ ဦးမောင်လက်များက ကျမနို့တွေကို ပွတ်သပ်နေသည်..။ဦးမောင့်လီးကြီးကို ငုံ့ကြည့်ပြီး ဖင်လေးကြွကာ ကျမစောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ တေ့သွင်းကာ ထိုင်ချလိုက်သည်..။
အ….အား…….ရှီး…..ကျင်သွားတာပဲ…သူ့ဟာကြီးက သံချောင်းကြီး ကျနေတာပဲ…ဟွန်း…..
ကျမက ဦးမောင်နဖူးကို လက်သီးဆုပ်လေးဖြင့် လှမ်းထုကာ ရယ်သည်…။ ဦးမောင်က ကျေနပ်စွာ ပြုံးရင်း…။
ဦးမောင်ရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးပေါ်၌ ဖိထိုင်ချလိုက်တိုင်း ပြားပြားသွားသည်..။
သားအိမ်ဝ သွားထိလားမှ မသိတာ….ဖြေးဖြေးဆောင့် ပေါ့…
သူ…တော်တော် အတတ်ဆန်းချင်တယ်…. အဲဒါက အဆုံးလဲ မဝင်ပဲနဲ့….
ဝင်အောင် လုပ်ရင် ဝင်ပါတယ်….
ကွေးထားသော ကျမပေါင်တံလေး နှစ်လုံးကြားမှ တင်းမာပြောင်လက်နေသော ပန်းနုရောင် စောက်ဖုတ်လေးက ပြူးပြီး ထွက်နေသည်..။ ဦးမောင်ဒစ်ပြဲကြီးက စောက်ဖုတ်အကွဲလေးကို ဒရွတ်တိုက် ပွတ်ဆွဲနေရာ စောက်ဖုတ်လေး ဟစိဟစိဖြင့် ကျမခံချင်လာတယ်။
မဲနက်ကောက်ကွေးသော လီးမွှေးများက ကျမဖင်လေးကို ကြိပ်ကြိပ်ပြီး ဖိပွတ်နေရာ တင်ပါးလေးကို နောက်သို့ ထိုးထိုး ကော့ပစ်နေရှာသည်..။
လုပ်တော့ ကွာ…. ဦးမောင်ကလဲ ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး…..
အင်း ပေါ့…လို့ တစ်ခါထဲ ..လိုးမဲ့ အရေး…..
ကျမ မျက်နှာလေး လိမ်လှည့်ပြီး ပြန်ပြောသည်..။ သူ့လီးဒစ်ပြုတ်ကြီးကို ကိုင်ပြီး နွဲ့ဆိုးစောက်ဖုတ်အဝသို့ တေ့ပြီးမှ ကော်၍ လိုးသွင်းလိုက်သည်..။
ကျမ မျက်တောင်ကော့ကြီးများ မှေးစင်းကျသွားပြီး နှုတ်ခမ်းနှစ်မွှာကို စေ့ကပ်ပြီး အံလေးကြိပ်၍ ရှုံ့မဲ့ပြီး ငြီးသည်…။ ဦးမောင့်လီးတုတ်တုတ်ကြီးက စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ ပြည့်ကြပ်ပြွတ်သိပ်စွာ ဝင်နေရာ စောက်ဖုတ်လေးမှာ ပင်ကိုယ်ပုံစံ ရှည်ရှည်လေး မဟုတ်တော့ပဲ.. ဝလုံးလေးသဏ္ဍာန် ဝိုင်းစက်ပြည့်တင်းသွားပြီး စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများပါ ပျောက်ကွယ်ပြီး လုံးဝ အသားပေါက်ကလေးသာ ဖြစ်နေတော့သည်..။
ကျမစအိုပေါက်လေးမှာ တခါတရံ လီးကြီး ကျွတ်ထွက်ပြီး ချော် ချော်ထိုးမိလေတိုင်း ရဲခနဲ ရဲခနဲ ဖင်လေး ပြဲ ပြဲ သွားသည်ကို မြင်နေရလေသည်..။ပွတ်…ပြွတ်…..ပြစ်….ပလစ်…..ပြွတ်………. လီးကြီးက မှန်မှန် ဝင်ထွက်နေရာမှ တခါတလေ သွက်သွက်ခါသွားအောင် ပစ်ဆောင့်လိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်..။ အ…..အား……….ဖြေးဖြေး…ဦးမောင်ရယ်….နာတယ်ကွာ…..အဟင့်….ဟင့်……ပေါင်ဖြဲထားပေးလေ…တော်ကြာ အရမ်းစိထားတော့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသာလေးတွေ ပွန်းကုန်မှာ….အင်း….အင်း….အဟင့်…သူသိပ်ကြမ်းတာပဲ ကွယ်….အိချော မကောင်းဘူးလား..ဟင်…အင်း….လိုး…. ကျမတို့နှစ်ဦး လေသံမှာ ကြိတ်ပြီး တွတ်ထိုးနေကြသော်လည်း ရှင်းလင်းပီသစွာ ကြားနေရသည်..။ စောက်ရေများ စိုစိုစိစိလေးဖြင့် စောက်စိလေးမှာ ခပ်ညိုညို..၊ လီးကြီးအပြင်ထွက်လာတိုင်း အတွင်းပိုင် နှုတ်ခမ်းသားလေးများက ဒစ်ပြဲကြီးဖြင့် ချိတ်ချိတ်ပြီး ရဲခနဲ ရဲခနဲ ပြဲပြဲသွားသည်မှာ အရသာရှိလေသည်..။ အိုး….အ…အင့်……အင်း………..ထွက်ကုန်ပြီ ဦး….. ကျမ ဒေါသတကြီး ဟန်လေးဖြင့် ဦးမောင်ခါးကို လက်ပြန်ကိုင်ပြီး ဖင်ကြီး ပြားပြားသွားအောင် နောက်သို့ ဖိဆောင့်လိုက်လေသည်…။ အားရပါးရ ဆောင့်စမ်းပါ ဦးမောင်ရယ်……ရှီး….ကျွတ်…ကျွတ်…. ''ဖာသည်မ နင် သိပ်နှာကြီးတာဘဲ ရော့ အင့်'' ''ဖတ် ဖတ် ဖွပ် ဖွတ် ဘလွပ် ဘွတ်'' ဦးမောင် ရုတ်တရက် ဒူးထောက်လိုက်ပြီး တပေါင်ကျော် အနေအထား ယူပြီး တအားကြုံးလိုးတော့သည်..။ အား……အား…………..အား……………….. ဦးမောင်လီးတုတ်တုတ်ကြီးက အဆုံးထိတိုင် နစ်နစ် ဝင်သွားရုံမျှမက ဂွေးဥအတွဲကြီးပါ ကျွံဝင်သွားတော့မလောက် လိုးအားက ပြင်းထန်လွန်းလှသည်..။ ပေါင်တစ်ချောင်းက ဦးမောင်ပုခုံးပေါ်တွင် ရောက်နေသည်..။ကျမပေါင်နှစ်ချောင်းမှာ အပြဲဆုံး အကားဆုံးအနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေလေရာ လီးကြီးမှာ အရင်းခိုက်သည်အထိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး ဝင်နေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်..။ အား…အား……..အင့်….အား အား……… ''ဘွပ် ဘွပ်...ဗြစ် ဒုတ်'' ''စောက်ခေါင်းတစ်ခုလုံး ကျိန်းစပ်နေတာပဲရှင်။အား...ကွဲသွားပြန်ပြီ။ဖွတ် ဖွပ်'' ''ဖလှတှ ဖတှ ဘတှ အ အာ အားးးးးးးးးးး'' တံတွေးမြိုချလိုက် အော်လိုက်နှင့် ကြိတ်ပြီး ထွက်နေသော ကျမအသံက ပို၍ ဆက်ဆက်လာတော့ သည်…။ အား…အာ…..အား…အာ…..အ………“
”အင့် အဟင့် ဟင့် အွန့် အွန်း”
ဆောင့်လိုးနေပုံကိုလဲ ကြည့်အုံး…အော်တိုစက်သေနပ်ပစ်နေသလား ထင်ရသည်..။ လီးကြီးကို အစွမ်းကုန် လိုးထည့်နေခြင်းမို့ ကျမ အော်နေရပြီ…။ ခဏမျှ ဆက်တိုက်ဆောင့်ပြီး နို့လေးနှစ်လုံးကို တအားကြီး ကုန်းဖိနမ်းရင်း ဦးမောင်ရဲ့လီးတန်မဲကြီးမှာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြင့် တဖြေးဖြေး ငြိမ်သက်သွားတော့သည်..။
”ဦးမောင် ခဏနားပြီး ထပ်လိုးပေးပါဦးနော်”
ကျမ ညုတုတုပြောတော့ ဦးမောင်က ဘာမှပြန်မပြောဘဲ ကျမခေါင်းကိုအုပ်ကိုင်ပြီး သူ့လီး
လီးကြီးကို တယုတယနဲ့ကျမ လေးဘက်ထောက်ကုန်းပြီး စုပ်ငုံထားလိုက်တယ်။ဦးမောင်က
ကျမ ဖင်အိုးကြီးနဲ့ကျောပြင်ကို လက်ကြမ်းကြီးနဲ့ပွတ်သပ်ရင်း ဖီးလ်ခံနေတယ်။ကိုမင်းမော်
နမ်းရှိုက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ကျမနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးမှာတော့ ဦးမောင်လီးရည်တွေ ပေကျံနေလေသည်။
သူငယ်ချင်းလည်း အမုန်းဆွဲ (စ/ဆုံး)